Etihad Airways na-egosi UN Day Refugee Day site na inyere ndị gbara ọsọ ndụ Syria na Jordan aka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Etihad Airways na-egosi UN Day Refugee Day site na inyere ndị gbara ọsọ ndụ Syria na Jordan aka
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Jordan • Akụkọ na -agbasa Syria • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Etihad Airways, National Airline nke United Arab Emirates, amatala UN Day Refugee Day site na iwepụta atumatu agụmakwụkwọ na inye onyinye ngwa ngwa maka ndị gbara ọsọ ndụ Syria na Mrajeeb Al Fhood Camp na Jordan.
Emere Refbọchị Gbara Ọsọ Ndụ nke onwa na 20 June kwa afọ iji lekwasị anya na ọtụtụ nde ndị gbara ọsọ ndụ na ndị a chụpụrụ n'obodo ha, ndị a manyere ịhapụ ụlọ ha n'ihi agha, esemokwu na mkpagbu.
Dịka akụkụ nke ntinye aka ya iji kwado ihe ndị metụtara mmadụ, ụgbọ elu ahụ mepere Etihad Airways Learning and Development Center iji nye ụmụaka gbara ọsọ ndụ IT na nkà mmụta kọmputa, iji nyere ha aka ịkwadebe ha maka ọdịnihu.
Etihad kesara ụmụaka 2,400 nọ n'ogige ahụ akwụkwọ, akpa na ụlọ ọrụ, dịka akụkụ nke mmemme na-aga n'ihu iji nyere aka kwado agụmakwụkwọ n'etiti ndị otu na-enweghị atụ.
Linegbọ elu ahụ rụpụtakwara ụlọ oriri na ọakerụ Etiụ Etihad nke Etihad maka UAE 'Afọ nke Ndidi', iji zụlite ndị ọkachamara na-eme achịcha n'etiti ụmụ nwanyị gbara ọsọ ndụ nọ n'ogige Jọdan, ma nyere ha aka inweta ego site na ire ere achịcha.
Ndị na-eri nri Etihad nọ na bred na-eduzi ụmụ nwanyị, na-enyekwa ụmụ nwanyị onyinye na ihe eji esi nri.
Na mgbakwunye, Etihad esorola na Emirates Red Crescent na Mịnịstrị nke Ofesi na Mkpakọrịta International inye onyinye maka ihe enyemaka gụnyere akwa, blanket, ngwa eji enyere ndụ aka na nri kpọrọ nkụ maka ezinụlọ nọ n'ogige ahụ.
Linegbọ elu ahụ kesara ihe mkpuchi akwa 1,000 n'ụlọ ọgwụ dị n'ọhịa, nke na-elekọta ndị gbara ọsọ ndụ.
Ndị otu Etihad agadi management, Etihad Youth Council, na ndị ọrụ afọ ofufo ndị nnọchi anya Emirates Red Crescent na Ministry of Foreign Affairs na International Cooperation, sokwa ụmụaka na ndị bi n'ogige ahụ n'ọtụtụ ihe ntụrụndụ.
Khaled Al Mehairbi, Onye isi oche na-asọpụrụ nke Corporate Social Responsibility Program, Etihad Aviation Group, kwuru, sị: "Anyị kpebisiri ike inyere ụmụaka ndị a aka ịga n'ihu agụmakwụkwọ ha, iji nyere aka inweta ọdịnihu ka mma ma jikọta ọnụ na obodo."
“Mmụta bụ isi nkuku maka iwulite obodo ọ bụla, na site na ịkwado ohere agụmakwụkwọ ha, anyị nwere ike itinye ego na ọdịnihu nke ụmụaka ndị a ma nyere aka chebe ha ka ha ghara ịdaba na ịzụ ahịa mmadụ ma ọ bụ ụjọ. Ọ ga-amasị m ịkele ndị mmekọ anyị na ndị ọrụ afọ ofufo ndị sonyere anyị isonye na mmemme ndị a ma nyefee ihe. Mgbalị ha na oge ha ejiriwo oge dị ukwuu n'ije ozi ọma a. ”
Na mbụ, Etihad Airways enyela akwụkwọ agụmakwụkwọ ma nye aka rụzigharị ụlọ akwụkwọ na mba gụnyere India, Kenya, Serbia, Philippines, Bosnia, Uganda, Bangladesh, na Sri Lanka.